သရဲအိမ်ထဲမှရိုက်ကူးမိထားတဲ့ လူတွေရဲ့ ချစ်စရာကောင်းဆုံးသော မျက်နှာထားလေးတွေ… – Trend.com.mm
ကြောက်လည်းကြောက်တယ်… မဝင်ပဲနဲ့လည်းမနေနိုင်တဲ့ လူတွေ.. သရဲအိမ်ထဲမှာ ဘယ်လောက်တောင်ကြောက်လန့်နေမလဲဆိုတာကို ရိုက်ကူးထားတာပုံရိပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သူများကြည့်ပြီး ခွီမနေနဲ့ဦး.. ကိုယ့်အလှည့်ကျ ပြန်အရိုက်ခံနေရမယ်.. xD သူတို့အတွက်တော့ ထိုအချိန်မှာ အရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းနေမှာ မှန်ပေမယ့် ဒီပုံတွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါ ကာယံကာရှင်တွေကိုယ်တိုင်လည်း
ရယ်ပြုံးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ သရဲအိမ်ထဲမှာ လျှို့ ဝှက်ကင်မရာတပ်ထားပြီး လူတွေရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာထားလေးတွေကို ပိုင်ရှင်က ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပုံလေးတွေဖြစ်မလဲ..
ဒါဘယ်လို ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းလဲ ?
တစ်မိသားစုလုံး ဟိုဆွဲ ဒီဆွဲ xD
ကြောက်ပေမယ့် ပြူးနိုင်သေးတယ်…. o_o
အဝါရောင်လေးက ဘယ်သူလဲ..ဘယ်ကလဲကွယ်… 😀
အာ့ဘာဖြစ် ? -_-
တစ်ယောက်တည်း ထားခဲ့ဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့ :/
သူတို့နောက်တစ်ခါ ထပ်မလာလောက်တော့ဘူး… 🙁
ဒီပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့လည်း ဒီလိုအခြေအနေရောက်ရင် ဒီလိုဖြစ်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူတို့ရော သရဲအိမ်ထဲဝင်ဖူးလား..ဘယ်လိုခံစားရလဲ… ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံလေးတွေကို ပြန်အမှတ်ရစေတဲ့အနေနဲ့ ကွန့်မန်မှာမျှဝေခဲ့ပါဦး… 😉